Mgbanwe Na-eme 2009 | Martech Zone
Mgbanwe na-eme 2009
Saturday, January 9, 2010 Thursday, June 11, 2015 Douglas Karr
Mgbanwe na ozi dị na Mgbanwe na-eme bu ihe di egwu. Ọ bụ ezie na ọ na-ekwu maka nnabata ngwa ngwa nke mgbasa ozi na teknụzụ, m ka ga-ekwu na ọnụ ọgụgụ buru ibu ka na-anọchite obere ụmụ irighiri ihe ma a bịa na mkpokọta mmadụ. Ndị ọchụnta ego ka nwere oge iji gbanwee, ịnakwere ma nweta oke ahịa ma ọ bụrụ na ha emee ugbu a.
Pịa site na post ma ọ bụrụ na ịhụghị Mgbanwe na-eme na ndepụta gị ma ọ bụ email.
Ike agaghi agwu m ndia! N'ihi @mystark maka igosi m ya.
Tags: 2009mgbanwe na-eme
A Comprehensive Preview nke HTML 5
Usoro mgbanwe maka ịde blọgụ azụmahịa
Jan 11, 2010 na 9: 14 AM
Hey Doug, ejighị n'aka ma ọ bụrụ na ị maara ma ọ bụ na ọ maghị, e kere vidiyo a na mbụ iji kwado akwụkwọ a na-akpọ Socialnomics ~ M ga-ede akwụkwọ na nke a na Q4 2009 ~~> http://bit.ly/erikqualmann
Hụ saịtị gị n'anya na agụụ gị maka SM!
Jenụwarị 11, 2010 na 6:38 PM
Echere m na mgbasa ozi ọha na eze dị ka SEO ma ọ bụ ahịa email: ọ bụ ngwá ọrụ ọzọ na igbe ngwaọrụ nke ga-aba uru maka di na nwunye na-esote afọ. Ee, ọ ga-esiwanye ike ma ụzọ a ga-agbanwe, mana o doro anya na ọ bụghị fad. Ọ bụghịkwa ihe niile.
Nke a apụtaghị na ụlọ ọrụ ekwesịghị itinye ego na itinye ya n'ọrụ ugbu a, mana ha ekwesịghị ịpụ apụ ma ọ bụrụ na ha emeghị ya.